Maneran-tany dia mitombo manodidina ny karazam-borona 120 (mulberry). Ity hazo ity dia mahazatra any Japon, India, Shina ary Azia afovoany, ary ny voankazo sy ny raviny dia ampiasaina amim-pahombiazana amin'ny fitsaboana satria manana ny medikaly izy ireo. Fantatrao ve? Ny kankan'ny silkora dia mamahana ravina fotsy fotsy. Ny hazo mulberry dia hazo tsy mora tapaka sy mangatsiaka, izay mahatonga izany ho zavamaniry tena ilaina amin'ny faritra rehetra.
Ny zava-drehetra tokony ho fantatrao amin'ny fitomboan'ny spinach
Spinach dia vokatra legioma izay ahitana vitaminina mora simba, asidra organika sy menaka, micro sy macronutrients ilaina amin'ny sakafo mahasalama. Tena ilaina sy mahafinaritra eo amin'ireo latabatra ireo. Ny fiterahana matetika amin'ny spinach dia fisorohana tsara ny aretin'ny digestive, ny savorovoro, ny aretim-pivalanana, ny fikorontanan'ny metabolika, manatsara ny fiarovana.
Fitomboan'ny parsnips ao amin'ny firenena: fambolena zana-ketsa sy fikarakarana any an-tsaha
Pasternak dia legioma, ary tsy hoe tena matsiro, fa tena ilaina ihany koa. Na izany aza, ny fambolena ao am-pandriana ao an-trano dia manana tsiranoka marobe, izay tsy ahafahany mahazo vokatra lehibe. Momba ny fandrefesana toy izany amin'ny fambolena parsnips, ary mamaritra etsy ambany. Fambolena karazan-tsakafo ho an'ny zana-ketsa Ny endriky ny fambolena parsnips ao amin'ny firenena dia miankina amin'ny endriky ny legioma toy ny vanim-potoana maharitra.
Kohlrabi Vitamin Bomb: ny zavatra rehetra tokony ho fantatra momba ny fambolena sy fiahiana
Ity karazana karaoty ity dia tonga avy any Sisila. Mahafinaritra tokoa ny laza any Eoropa Andrefana sy Torkia. Ny mpikaroka any an-toerana dia mahafantatra ny fomba hampitomboana karaobi kohlrabi, satria heverina ho baomba vitaminina ary mihoatra ny havana hafa ao anaty tsiro. Momba an'i Kohlrabi Kohlrabi dia lava-boalavo voalohany, lava-maina.
Ny karazana Aimatode sy ny fomba fanaraha-maso ny bibikely
Ny nematodes no anisan'ny bibikely mahatsiravina sy mampidi-doza indrindra. Tsy vitan'ny hoe mitondra aretina, fahafatesana ny zavamaniry, fa mety hanimba ny fahasalaman'ny olombelona sy ny biby. Anatin'ity lahatsoratra ity dia hijery ny karazana nematodes sy ny misy azy isika, ary manome toro-hevitra fototra momba ny fomba hiadiana amin'ny nematode iray ao an-jaridaina.
Inona no ompiana ao an-jaridaina sy ao an-tranony mandritra ny fahavaratra, any an'ala ary eny an-tanety
Ny mòlitra, sy ny tsimok'aretina ary ny sokitra dia an'ny filahatry ny bibikely. Izy ireo dia mipetraka any amin'ny faritra misy tany mibontsina na tsy mitsaha-mitombo - ao anaty ala, amin'ny tondra-drano any amin'ny renirano, eo amin'ny sisin'ny ala mando sy miangona. Molefy matetika ao amin'ny saha na zaridainanay. Koa satria na aiza na aiza, dia misy toerana voavaha amin'ny fitrandrahana, manangona kankana amin'ny tany, ary mihady amin'ny tany tiana hipetraka ao amin'ny toerana fihadiana manan-karena toy izany.
Ahoana ny fomba hanesorana ny kalo ao amin'ny trano: fomba fiady
Ny tompon'ny trano fialan-tsasatra matetika dia miteraka parasy toy ny mole. Fa lolo kely kely nefa tena ratsy be, izay mety hitarika ho amin'ny fahavoazana lehibe. Ny bakteria toy izany dia mety hanimba ny akanjo lafo vidy mba tsy hahavery azy io. Andeha hojerentsika ny fomba hiatrehana ity olana ity na hanakana ny fisiany.
Fomba hitazanana totozy: fantsom-pako avy amin'ny tavoahangy plastika
Raha te hody amin'ny trano iray, trano na efitrano fanampiny ianao, dia mila manaisotra azy ireo ianao. Ny totozy dia afaka mampisy fahasimbana goavana amin'ny tahirin-tsakafo, manimba zava-tsarobidy, lasa loharanon'ny fofona sy ny aretina tsy mahafinaritra. Ity lahatsoratra ity dia mamaritra fomba maro ahafahana mampihetsi-po amin'ny fitaovana misy amin'ny tanany manokana.
Fombafomba an-trano ho an'ny voalavo: fomba entina amidy sy ahazoana biby
Hatramin'ny vanim-potoana malaza Hammelnian Pied Piper, izay nanasitrana ny raty rehetra tao an-tanàna ary nandevozin'ny ranom-pahavaratra tao an-drenivohitra dia nisy rano be dia be. Saingy niova kely ny fifandonana mandrakizay teo amin'ny olombelona sy ny avonavona mahery. Ny olona amin'ny alalan'ny fahaiza-mamantatra mahery sy ny fahaiza-mamorona dia tonga miaraka amin'ireo fitaovana vaovao rehetra izay manimba ny bibikely, ary ireo avonavona manana fahavokarana lehibe sy ny faharetana alohan'ny hikapohana vetivety dia mameno ny fahavoazana ary manohy indray ny fanafihana amin'ny vilany.
Karôlina amin'ny ririnin-tsolika: ahoana no hiadiana amin'ny bibikely ao amin'ny zaridaina
Ny fanomanana voankazo iray ho an'ny ririnina dia lasa asa goavana ho an'ny mpikarakara ny zaridaina rehetra sy ny lohataona, izay tsy maintsy ho tanterahina mandritra ny vanim-potoan'ny fararano mba hamoronana ny fepetra tsara indrindra sy voaaro amin'ny hazo fihinam-boa ary ny fahamandoany mahomby. Tena marina tokoa izany ho an'ny hazo fihinam-boa, izay mora indrindra amin'ny toe-piainana henjana amin'ny ririnina.